Fakafaka: tsy fanao ny safosioka fa aleo mijery ifotony | NewsMada
Fakafaka: tsy fanao ny safosioka fa aleo mijery ifotony
Hoentina hampandriana adrisa mando elatra ihany ny safosioka fa tsy azo itokisana hahazoana laoka ! Tsy ho tonga any amin’ny tanjona hotratrarina mihitsy ny fampianarana sy ny fanabeazana eto Madagasikara raha mbola mijanona eo amin’ny resaka fidirana sy fialantsasatra ary ny fanadinana hotontosaina ny fanovana na fanarenana ny lesoka nisy hatramin’izay.
Ekena, misy olana ao amin’ireo fa tsy laharam-pahamehana noho ny fanamboarana tanteraka ny votoatin’ny fampianarana omena ny taranaka malagasy. Mifanindran-dalana amin’izany ny fametrahana rafitra hoenti-mandray na mizaka izay mety ho vokatry ny fanavaozana natao. Mila mafy tsara io rafitra io mba tsy hanao dia miverina ny hevitra tinapaka.
Tahaka inona ny zavatra tokony hampianarina ao anatin’ny taranja iray ? Ilaina ve ny tahaka izatsy na tahaka izaroa hampidirina ao anaty taranja ianarana sa sao sanatria misavaon-danitra fotsiny ka tsy mipaka any amin’izay tokony hiantefany ? Takin’ny firenena sy ny vanim-potoana amin’izao ve ity taranja ity ?… Fanontaniana marobe tahaka izany no mila valiana raha tiana ny hahita vokatsoa eo amin’ny fampianarana sy fanabeazana ny zaza malagasy ?
Ny tsy azo lavina mantsy, saika rafi-mpampianarana sy taranja novolavolain’ny mpanjanaka hahasoa azy no lasa lova manahirana ny Malagasy amin’izao. Na ny vanim-potoana sy ny tena zava-misy marina tamin’izany sy ny amin’izao aza efa tsy mitovy intsony. Noho izany, aleo mijery ifotony…
Mila fahasahiana ny fanovana ifotony raha eo amin’ny tontolon’ny fampianarana sy fanabeazana eto Madagasikara. Avy any amin’ny fototra ihany koa no hanaingana izany. Iray amin’ireny ny teny hoenti-mampianatra. Sa ve, aleo amin’izao ihany fa mahamenatra izany mianatra amin’ny Teny malagasy izany ?